Kushamwaridzana: Shandura Netiweki Yako Kuti Uvhare Mamwe Maitiro Neiyi Hukama Intelligence Platform uye Analytics | Martech Zone
Ivhareji manejimendi hukama hwehukama manejimendi (CRM) mhinduro ipuratifomu yakanaka ... dhatabhesi yekubatana, zviitiko zvavo, uye; pamwe, kumwe kusanganisa pamwe nemamwe masisitimu ayo anopa imwezve njere kana mikana yekushambadzira. Panguva imwecheteyo, kubatana kwese mudhatabhesi rako kune kwakasimba, kwakabatana kubatana kune vamwe vatengi uye vebhizimusi vanoita sarudzo. Uku kuwedzerwa kwewebsite yako hakuna kubatwa, hazvo.
Chii chinonzi Ukama Hwenjere?
Hukama njere matekinoroji ongorora yako yedata yekutaurisa data uye otomatiki gadzira hukama girafu inodiwa kuti uwane bhizinesi zvakakosha. Iyo yehukama girafu inopa maonero akazara ekuti ndiani timu yako anoziva uye kunyatsovaziva kwavo, zvichidaro kukuratidza iwe nzira dzakanakisa dzekusuma kana kutumira.
Nei Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira uye Hukama Hwehungwaru ndiPerfect Union
Kushamwaridzana kwakafanana nemusanganiswa weLinkedIn uye Salesforce, chete neArtificial Intelligence kuti unzwisise hukama hwehukama (kusiyana neII) uye nemidziyo yekushandisa yekubvisa marwadzo kunze kweCRM manejimendi. Iyo yekambani patent tekinoroji zvivakwa uye inoongorora anopfuura bhiriyoni data poindi kumaemail, makarenda, uye wechitatu-bato masosi ekupa vashandisi maturusi avanoda kuti vagadzirise otomatiki hukama hwavo hwakakosha, kukoshesa kwakakosha kubatana, uye kuwana mikana isina kubikwa.
sungano otomatiki anotora kudyidzana kwese timu yako ine yekutaurirana kana sangano. Iyo zvakare inonatsiridza chero chimiro neakakosha hukama hwehukama husinga sanganiswe mune yechitatu-bato dhata sosi senge Crunchbase, Clearbit, uye ako epamhepo marekodhi.
sungano retroactively inogadzira iyo chaiyo Rolodex yekambani dzese uye nevanhu timu yako yavakabatana nayo uye nekugadzirisa iyo mune chaiyo-nguva.
Affinity Alliance inokutendera iwe batanidza nevamwe vari kunze kwechikwata chako kuti unzwisise kuti ndiani ari mumutambo wako anogona kupa mhemberero dzinokosha zvikuru.
Affinity Analytics yakasarudzika, chaiyo-nguva yekuburitsa chishandiso chinopa maindasitiri-ekutanga nzwisiso muhukama hwekunze kwechikwata uye mabatiro avanoita kukanganisa kambani dhizaini kuyerera, pombi, zviitiko zvekubatanidza, uye zvimwe zvakakosha zviratidzo zvekuita. Iye zvino inowanikwa kuburikidza nekubatanidzwa pamwe nebhizimusi njere uye analytics chikuva kubva kuGoogle Cloud, Kutarisa, Affinity Analytics inouya sechikamu chakabatanidzwa chePremium uye Enterprise editions yeiyo Affinity chikuva kana sekuvandudza kweVatengi vatengi.
Affinity Analytics inovaka pane yakakosha data muhukama hwehukama hwehukama hwepuratifomu yekupa yakadzama nzwisiso muchikwata cheCRM dhata. Nepo mapuratifomu mazhinji eCRM achipa chete akakosha, ekutanga ekuzivisa kugona, Affinity Analytics inopa zvakakwana madhibhodhi akagadziridzwa uye granular, chaiyo-nguva mishumo kubatsira makambani kuitisa ongororo yakadzika mumatanho uye madhiraivhu ekuita anokanganisa maitiro akaomarara ebhizinesi.
Zvinopfuura makumi maviri maonero ekuona anowanikwa pane chero runyorwa mukati mehukama hwehukama huchenjeri chikuva. Mepu dzese dzinogona kucherwa zvakadzama zvichibva pazvikamu zvetsika senge indasitiri yakamira, mhando yekambani, saizi yekambani, nezvimwe zvinhu. Vashandisi vanogona kutumira kunze kana kutumira email chero zvimishumo zvekugovana navo nevanokosha.
Iyo yakazara-yakatarwa dhata seti inopa makambani chaiwoiwo-nguva kuoneka mukuita kwechikwata chavo uye ichivagonesa kukanda mu data kuti vaburitse mhinduro kumibvunzo yekuti kupi uye sei kwekudyara kwavo kuyedza kwechikwata chavo nekutarisa. Nepo mabhizinesi achigona kuvaka chero huwandu hwemishumo inogadziriswa neAffinity Analytics, maviri eakafanorongedzwa mushumo anosanganisira:
Kuongorora kwefanera: Inogonesa makambani kuteedzera mashandiro epombi yavo nekuongorora nhanho dzese dzechibvumirano, kusanganisira mitengo yekushandura padanho rega rega, avhareji nguva iyo inosara inogara mune yega nhanho, chiitiko chekupedzisira zvibvumirano zvisati zvahwinhwa kana kurasikirwa, uko madhiri akanakisa ari kutorwa kubva, uye nezvimwe.
Chikwata Chekuita Nhoroondo: Inopa kuongororwa kwemaemail echikwata, mafoni, misangano uye zvimwe zviitiko, zvakaputswa nemaindasitiri, dunhu, uye nezvimwe, kuitira kuti vape nzwisiso yakakosha mukuita kwechikwata uye kubudirira kana kukanganisa kwekufambidzana kwavo netarisiro kana nhare.
Iyo Affinity chikuva inobatsira vashandisi kubata hukama kune vanhu vanosvika mamirioni makumi matatu nemasangano mamirioni manomwe. NeAffinity Analytics, vashandisi ikozvino vane imwezve nzwisiso mukubatana kwavo nevekunze vanobata uye kuti zviitiko izvi zvinogona sei kugadziridzwa kugadzirisa dhizaini uye maneja manejimendi.
Verenga Zvakawanda Nezve Kushamwaridzana Verenga Zvimwe Nezve Affinity Analytics
Tags: kubatanakuwirirana analyticsaichakagadzirwa njereCRMcrm dhatamutengi wehutano hwehukamafanera analyticsmutarisirihukama huchenjerihukama huchenjeri chikuvayekutengesa timu chiitiko
Visme: Chishandiso cheMagetsi cheKugadzira Anotyisa Ekuona Zvemukati